10 तरिकाहरू वेबसाइट रिडिजाइनले तपाईंको सानो व्यवसायलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ - Print Peppermint
10 तरिकाहरू वेबसाइट रिडिजाइनले तपाईंको सानो व्यवसायलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ
जनवरी 3, 2022 | ब्रान्डिङ, उद्यमी, ग्राफिक डिजाइन, मार्केटिङ, स्वरोजगार
यस्तो उमेरमा जहाँ लगभग सबै कुरा भर्चुअल रूपमा भइरहेको छ, हामी निश्चित छौं कि तपाइँसँग पहिले नै तपाइँको सानो व्यवसायको लागि वेबसाइट छ।
तर, हामीले सोध्नु पर्छ: अन्तिम पटक तपाईंले यसलाई पुन: डिजाइन कहिले गर्नुभयो? के तपाईंले यसको बारेमा कहिल्यै सोच्नुभएको छ?
ठिक छ, चाहे यो उमेर भएको होस् वा कहिल्यै, यो परिवर्तन गर्ने समय हो!
विशेष गरी अधिक र अधिक व्यवसायहरू अब डिजिटल भएका छन्, तपाइँको वेबसाइट नयाँ नेतृत्व र बिक्री ड्राइभ गर्न को लागी एक शक्तिशाली उपकरण भएको छ। मानिसहरूले आफूलाई उत्पादन वा सेवाहरू अनुसन्धान गर्न, तुलना गर्न र किन्न आवश्यक पर्दा इन्टरनेटमा जान बानी बसालेका छन्।
त्यसकारण वेबसाइट पुन: डिजाइन गर्नु भनेको तपाईंले आज प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा हो। त्यसो गर्नाले तपाईंलाई उपभोक्ता व्यवहारमा भएका परिवर्तनहरू जारी राख्न मद्दत गर्दछ, जसको मतलब तपाईंले अनलाइन प्राप्त गर्ने परिणामहरूलाई अधिकतम बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
आफ्नो वेबसाइटलाई परिमार्जन गरेर, तपाईंले यसको रूप र अनुभूतिमा सुधार गर्नुहुनेछ, नयाँ सुविधाहरूको साथ यसलाई विस्तार गर्नुहुनेछ, र तपाईंको आगन्तुकहरूलाई राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव (UX) प्रदान गर्नुहुनेछ। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, यसले तपाईंको व्यवसायलाई अर्को स्तरमा लैजान्छ।
हामी भनिरहेका छैनौं कि तपाईंको साइटको पूर्ण नवीकरण हुनुपर्छ - जबसम्म, यो अति पुरानो देखिने ती सबै आकर्षक एनिमेसनहरूका साथ मात्र आगन्तुकहरूलाई डराउँछ। सानो लगानीले पनि ठूलो परिणाम ल्याउन सक्छ।
त्यसोभए, तपाईको सानो व्यवसायले कसरी राम्रो वेबसाइट पुन: डिजाइनबाट फाइदा लिन सक्छ? तल पत्ता लगाउनुहोस्!
उच्च खोज इन्जिन रैंकिंग
छवि स्रोत: अडियोलोजी डिजाइन
राम्रोसँग डिजाइन गरिएको साइट भनेको राम्रो एसईओ हो। राम्रो एसईओ भनेको खोज इन्जिनहरूमा उच्च श्रेणीकरण गर्ने, अर्गानिक ट्राफिक चलाउने, र अन्ततः थप बिक्रीहरू उत्पन्न गर्ने ठूलो सम्भावना हो।
तपाइँको वेबसाइटलाई पुन: डिजाइन गर्नाले तपाइँलाई तपाइँको लक्षित दर्शकहरूको लागि दृश्यता बढाउन प्रमाणित खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन रणनीतिहरू प्रयोग गर्ने मौका दिन्छ। मेटा प्रयोग गरेर र कुञ्जी शव्द-धनी सामग्री लेख्नुले अन्य धेरै प्रविधिहरू बीच ट्रिक गर्नेछ।
अझ के छ, राम्रोसँग डिजाइन गरिएको साइटले थप ब्याकलिङ्कहरू आकर्षित गर्न खोज्छ, जसले तपाइँको र्याङ्किङलाई थप धकेल्न सक्छ। र, एक पटक अनलाइन खोजकर्ताहरूले तपाइँको लिङ्कमा क्लिक गरे र तपाइँको गृहपृष्ठमा देखेका सबै चीजहरू मनपर्छ, तिनीहरू सम्भवतः तपाइँको बाउन्स दर घटाउँदै, केहि लामो समयसम्म रहन्छन्।
तपाइँको साइटको कोड देखि यसको अन्तिम प्रतिक्रिया को लागी, तपाइँ तपाइँको कम्पनी को वेबसाइट को पुन: डिजाइन गर्दा सधैं SEO मा लिनुहोस्।
थप लीड र रूपान्तरण
वास्तविक बनौं, धेरै धेरै वेबसाइटहरू आगन्तुकहरूलाई रूपान्तरणको लागि अवस्थित छन्। तपाइँ तपाइँको दर्शकहरूलाई अपोइन्टमेन्ट अनुसूचित गर्न, तपाइँको न्यूजलेटरमा साइन अप गर्न, उत्पादन किन्न वा एउटा एप डाउनलोड गर्ने लक्ष्य राख्नुहुन्छ, यो सधैं रूपान्तरणको बारेमा हो।
यो जहाँ वेबसाइट रिमोडेलिंग सुपर काममा आउँछ।
प्रभावकारी रूपान्तरण अप्टिमाइजेसन रणनीति र ग्राउन्डब्रेकिंग सुविधाहरूको कार्यान्वयनको साथ, राम्रो वेबसाइट पुन: डिजाइनले तपाईंको नेतृत्व र रूपान्तरणहरू बढाउन सक्छ।
तपाईंको CTA (कल टु एक्शन) क्लिक गर्नका लागि तपाईंको आगन्तुकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने जानकारीको प्रवाह प्रस्तुत गरेर तपाईंको प्राथमिक फोकसको रूपमा रूपान्तरणलाई मात्र बनाउनुहोस्। स्पष्ट, बाध्यकारी CTA ले उनीहरूलाई तपाइँ उनीहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ र बटन थिचेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्षम बनाउँछ।
राम्रो जानकारी प्रवाह
तपाइँका सम्भावितहरूले रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्नु अघि, उनीहरूले तपाइँको बारेमा थप जान्नुपर्दछ - तपाइँको ब्रान्ड के हो, साथै तपाइँले प्रस्ताव गर्ने उत्पादनहरू र/वा सेवाहरू। आखिर, यही कारण हो कि तिनीहरू पहिलो स्थानमा तपाइँको साइट भ्रमण गर्दै छन्।
धेरै वेबसाइटहरू, विशेष गरी पुरानाहरू, प्रायः आगन्तुकहरू गुमाउँछन् किनभने तिनीहरू मानिसहरूले खोजिरहेका जानकारी समावेश गर्न असफल हुन्छन्। चाहे यो तपाइँको कम्पनीको प्रोफाइल, इतिहास, वा तपाइँ के प्रस्ताव को एक विस्तृत सूची हो, तपाइँको दर्शकहरु लाई तपाइँको साइट मा हेर्न को लागी आशा गर्नेछ।
यदि त्यहाँ केहि छैन, वा हुनसक्छ केवल एक मुट्ठी जानकारी, तिनीहरू कतै जान्छन्। तपाईंको भविष्यका ग्राहकहरू त्यहाँ जानुहोस्!
यो अझै अर्को उदाहरण हो जहाँ वेबसाइट पुन: डिजाइन दिन बचत गर्न आउँछ।
तपाईका यहाँ दुईवटा मुख्य कार्यहरू छन्: तपाईका आगन्तुकहरूले जान्न चाहने सबै आवश्यक विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस् र तिनीहरू एक पृष्ठबाट अर्को पृष्ठमा सर्दा तिनीहरू पहुँच गर्न अविश्वसनीय रूपमा सजिलो हुने तरिकाले गर्नुहोस्।
सुधारिएको प्रयोगकर्ता अनुभव
छवि स्रोत: TechTerms.com
खराब UX प्रदान गर्ने कुनै पनि वेबसाइटले कम्पनीको लागि प्रकोपको मन्त्र दिन्छ। नेभिगेट गर्न कठिन समय भएका प्रयोगकर्ताहरू अर्को छुटेका अवसरहरूमा परिणत हुनेछन्। साइट कसरी काम गर्दछ भनेर पत्ता लगाउन कोही पनि समय बर्बाद गर्न चाहँदैन।
वास्तवमा भन्ने हो भने, 88% अनलाइन बिक्रेताहरूको खराब प्रयोगकर्ता अनुभवको सामना गरेपछि वेबसाइटमा फर्किने छैन। 44% ले आफ्नो साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा बताउनेछन्, चोटमा अपमान थप्दै।
तपाईंको साइटले सबैलाई सुखद अनुभव प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, यसको कार्यक्षमताको पुन: मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र अद्यावधिकहरू बनाउनुहोस् जसले तपाईंको आगन्तुकहरूलाई थप व्यस्त राख्छ। वेबसाइट पुनर्निर्माणको बेला भन्दा यो गर्नको लागि कुनै राम्रो समय छैन।
छवि स्रोत: उमेगा
तपाइँसँग पहिले नै एक विचार छ कि कसरी वेबसाइट पुन: डिजाइनले तपाइँको र्याङ्किङ्ग बढाएर, योग्य ट्राफिक ड्राइभ गरेर, थप लीडहरू उत्पन्न गरेर र अन्ततः तिनीहरूलाई रूपान्तरण गरेर तपाइँको राजस्व बढाउन सक्छ।
जे होस्, के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि यसले लामो समयसम्म तपाईंको पैसा बचत गर्न सक्छ?
पूर्ण नवीकरण गरेर, तपाईं आफ्नो होस्टिङ र सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली पुन: मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईले अहिलेको जस्तै, वा अझ राम्रो, क्षमताहरू भएको पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ। उचित मूल्य.
र, कार्यक्षमता समस्याहरू समाधान गर्न वा भविष्यमा थप सुविधाहरू थप्नु भन्दा पुन: डिजाइन गर्न यो सामान्यतया बढी लागत-प्रभावी हुन्छ। ब्यान्ड-एड समाधानहरूमा तपाईंको डलर फाल्नुको सट्टा, पूर्ण ओभरहालले तपाईंलाई सबै कुरा स्क्र्याचबाट प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
सबै भन्दा धेरै, वेबसाइट फेसलिफ्टले पक्कै हराएको अवसर र तपाईंको पुरानो, जर्जर साइटबाट राजस्वको लागत घटाउनेछ। निश्चित रूपमा एक प्रमुख पैसा बचतकर्ता।
छवि स्रोत: स्थानीय ब्लगमा पहुँच गर्नुहोस्
तपाइँको साइट को पुन: डिजाइन मा तपाइँको साना व्यवसाय र प्रस्तावहरु को बारे मा तपाइँको दर्शकहरु लाई नवीनतम जानकारी दिन को लागी तपाइँको सामग्री को ताजा गर्न को लागी शामिल छ। तपाईंले उनीहरूलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्न कि तपाईंले अझै दुई वर्षको लागि चरणबद्ध वस्तु बेच्दै हुनुहुन्छ, के तपाईं?
जसरी व्यवसायहरू सधैं विकसित भइरहेका छन्, त्यसैगरी तपाईंको कम्पनीको वेबसाइट हुनुपर्छ।
सटीक ब्रान्ड प्रतिनिधित्व
छवि स्रोत: मार्केट डोनट
यो केवल तपाइँको उत्पादनहरु र/वा सेवाहरु लाई केहि अपडेट गर्न आवश्यक छैन, तपाईले तपाइँको कम्पनी बायो, मिशन स्टेटमेन्ट, र लक्ष्यहरु लाई पनि विचार गर्नुपर्छ। तपाईको व्यवसाय वर्षौंको दौडान बढेको र विकसित भएको छ, जुन तपाईले आफ्नो वेबसाइटको यी भागहरू अपडेट गर्नु मात्र उपयुक्त छ।
विशेष गरी यदि तपाईंले केहि समय पहिले पुन: ब्रान्ड गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने, तपाईंले आफ्नो नयाँ पहिचान, मूल विश्वास, उद्देश्यहरू, र कुन कुराहरू प्रतिबिम्बित गर्न आफ्नो वेबसाइटलाई पुन: डिजाइन गर्न राम्रो समय खर्च गर्नुपर्छ।
छवि स्रोत: गुलाबी रणनीतिहरू
93% उपभोक्ताहरू स्थानीय व्यवसायहरू फेला पार्न तिनीहरूको मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गरेर अनलाइन हेर्नुहोस्। मा अर्को अध्ययन, 90% खरीददारहरूले रिपोर्ट गर्छन् कि उत्कृष्ट मोबाइल अनुभवले उनीहरूलाई दोहोर्याइएको खरिद गर्न मनाउन सक्छ।
त्यसोभए, यदि तपाईंले आफ्नो साइटलाई मोबाइलको लागि अप्टिमाइज गर्नुभएको छैन भने, यसलाई तपाइँको वेबसाइट पुन: डिजाइन प्रयासहरूको भागको रूपमा समावेश गर्न निश्चित हुनुहोस्।
उत्तरदायी डिजाइन लागू गर्नु मुख्य कुरा हो। यसको मूलतया अर्थ तपाईको साइटलाई सबै स्क्रिन आकारका उपकरणहरूबाट सजिलैसँग पहुँच गर्नुपर्दछ। तपाइँका आगन्तुकहरूले जुनसुकै यन्त्र प्रयोग गरिरहनुभएन, उनीहरूले तपाइँको वेबसाइटलाई सम्भव भएसम्म राम्रो प्रकाशमा देख्नेछन्।
साथै, यसले तपाइँको एनालिटिक्सलाई समेकित गर्दछ र व्यवस्थापन गर्न धेरै सरल छ, विशेष गरी चलिरहेको अप्टिमाइजेसनको सर्तमा।
अपडेट र व्यवस्थापन गर्न सजिलो
आधुनिक सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूको लागि धन्यवाद, तपाईं जस्ता साना व्यवसाय मालिकहरूले अब साना समस्याहरू समाधान गर्न वेब डिजाइनरहरू भाडामा लिन आवश्यक पर्दैन।
वर्डप्रेस जस्ता वेब होस्टिङ प्लेटफर्महरूले अब सबैलाई आफ्नै वेबसाइटहरू व्यवस्थापन र अद्यावधिक गर्न सम्भव बनाएको छ। हो, हाम्रो मतलब तपाईं सहित सबैजना हो। कुनै पनि प्राविधिक ज्ञान हुनु आवश्यक छैन!
विशेषज्ञलाई भर्ना नगरी सबै अद्यावधिकहरू गर्नाले तपाईंलाई हजारौं डलर बचत गर्नेछ। र, जब तपाईं व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईंले सधैं आफ्नो टोलीका कुनै पनि सदस्यलाई तपाईंको लागि काम गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। साँच्चै सुविधाजनक सुनिन्छ, हह?
परिष्कृत ब्रान्ड छवि
पहिलो छापहरू अन्तिम। तपाईंको वेब डिजाइनले तपाईंको सानो व्यवसाय बनाउन वा तोड्न सक्छ।
यदि तपाइँको वेबसाइट सस्तो देखिन्छ वा इन्टरनेट पहिलो पटक प्रस्तुत गर्दा सिर्जना गरिएको जस्तो देखिन्छ, तपाइँ आगन्तुकहरूलाई तपाइँको ग्राहक बन्नबाट टाढा लैजानुहुन्छ। यद्यपि तिनीहरू फर्कने मौका छ? हामीलाई शंका छ ।
अर्कोतर्फ, आफ्नो वेबसाइटलाई आधुनिक डिजाइन र अनुभूति दिने प्रयास गरेर, तपाईंले आफ्ना दर्शकहरू बीच विश्वास र ब्रान्ड पहिचान स्थापित गर्नुहुनेछ। 75% मानिसहरूले वास्तवमा व्यापारको वेबसाइट यसको विश्वसनीयताको आधारको रूपमा प्रयोग गर्छन्। त्यति मात्र होइन, तर आकर्षक साइटले उनीहरूलाई अन्वेषण जारी राख्न र थपको लागि फिर्ता आउन पनि सक्छ।
तपाईंका आगन्तुकहरूले तपाईंको वेबसाइटलाई तपाईंको व्यवसायसँग सम्बद्ध गर्नेछन्। यदि तिनीहरूले यो सान्दर्भिक र आकर्षक फेला पारे भने, सम्भावनाहरू छन्, तिनीहरूले तपाईंको ब्रान्डको बारेमा पनि त्यस्तै महसुस गर्नेछन्।
के तपाईं आज आफ्नो वेबसाइट पुन: डिजाइन सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ?
छवि स्रोत: Midriff जानकारी समाधान
यदि सम्भावित ग्राहकहरूको लागि सम्पर्कको पहिलो बिन्दु छ भने, यो तपाइँको वेबसाइट बिना प्रश्न हो। यसैले यसलाई पुन: डिजाइन गर्न महत्त्वपूर्ण भन्दा बढी छ यदि यो सदाको लागि तपाईंले अद्यावधिक गर्नुभयो। अन्यथा, तपाइँ तपाइँको सम्भावनाहरु लाई तपाइँका प्रतियोगीहरु लाई टाढा राख्दै हुनुहुन्छ।
तल्लो रेखा हो, तपाइँको वेबसाइट को पुन: डिजाइन तपाइँको सानो व्यवसाय को भविष्य को लागी एक लगानी हो।
जबसम्म तपाईं बजेटमा अत्यन्तै कडा हुनुहुन्न, तपाईंको सबैभन्दा राम्रो शर्त एक भाडामा लिनु हो मियामी मा वेबसाइट डिजाइन विशेषज्ञ काम पूरा गर्न। त्यसोभए फेरि, हामी तपाईलाई केहि सानातिना सुधारहरू गर्न निरुत्साहित गर्दैनौं। तपाईं दुबै विकल्पहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ!
← विश्वमा लेटरप्रेस प्रिन्टिङका ​​लागि उत्कृष्ट पेपरहरू!
कसरी एक आदर्श रिजुमे डिजाइन गर्ने →